RW Abiy Axmed oo eedeymo culus u jeediyey hoggaankii TPLF ee laga adkaaday | Xaysimo
Home War RW Abiy Axmed oo eedeymo culus u jeediyey hoggaankii TPLF ee laga...
RW Abiy Axmed oo eedeymo culus u jeediyey hoggaankii TPLF ee laga adkaaday
Ra’iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa eedeyn culus u jeediyey hoggaanka TPLF ee dagaalka kula jira ciidamadiisa.
Abiy Axmed oo warbixin siinayey baarlamaanka Itoobiya ayaa ku eedeeyey TPLF inay sumeeyeen janaraal ka tirsan ciidamada militeriga ee dalkaasi, kaa oo ka howlgalayey saldhig ku yaalla gobolka Tigray, ka hor inta aysan bilaaban dagaallada labada dhinac.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sheegay in janaraalka la sumeeyey oo lagu magacaabo, Diriba Mekonnen uu dhibkii kasoo gaaray sunta uu ilaa iyo hadda kasoo kici la’ayahay isla markaana uu shaqada ku laaban waayay, tan iyo markii la sumeeyey
Sidoo kale wuxuu shaaca ka qaaday in sarkaalkaas la sumeeyey, kaddib markii uu lasoo qadeeyey madaxda TPLF.
Abiy ayaa sidoo kale intaasi ku daray in tan iyo markii uu billowday dagaalka ay ku qaadeen gobolka Tigray in hal qof oo rayid ah aanan lagu dilin howlgalkaasi, balse waxaa hadalkaasi si weyn uga soo horjeestay hoggaanka sare ee gobolka Tigray.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyada oo xukuumadda Itoobiya ay ku dhowaaqday wejigii ugu dambeeyey ee dagaalka waqooyiga dalkaasi ee u dhexeeya ciidamada federaalka iyo kuwa TPLF, waxaana dowladda ay sheegatay inay qabsatay caasimada Makelle.